Hello Nepal News » हराएको मोबाइल यसरी भेट्टाउन सकिन्छ !
हराएको मोबाइल यसरी भेट्टाउन सकिन्छ !
आफ्नो मोबाइल फोन हरायो भने जसलाई पनि तनाव हुन्छ । एकातर्फ पैसाको क्षति, अर्कोतर्फ मोबाइलमा सेभ गरेका तमाम् फोन नम्बरहरू फेरि जुटाउने झन्झट त भई नै हाल्छ ।
तर, जति सावधानी अपनाए पनि मोबाइल हराउन सक्ने खतरा जहिल्यै पनि हुन्छ । हराएको मोबाइल हत्पत्ति भेटिँदैन पनि । तर, हामी यस्तो उपाय सिकाउँदै छौं जसले कम्तीमा हराएको मोबाइल कुन स्थानमा छ भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
यो उपायले एन्ड्रोइड फोनमा मात्रै काम गर्छ । निम्नलिखित प्रक्रिया अनुशरण गर्नुस् :
फोन हराउनुभन्दा अगाडि नै तपाईंले सावधानी अपनाउनुभयो भने हराएपछि खोज्न सजिलो हुन्छ । यसका लागि तपाईं सबैभन्दा पहिले एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा गुगल सेटिङमा जानुस् । त्यहाँ सेक्युरिटी आइकनमा गएर तपाईंले ‘लोकेट द डिभाइस’ अप्सनलाई अन गर्नुपर्छ । यो अप्सनबाट तपाईंले आफ्नो हराएको फोन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ ।
कम्प्युटरबाट ट्र्याक गर्ने
यसका लागि कम्युटरको ब्राउजर खोलेर एन्ड्रोइड डिभाइस म्यानेजरमा जानुस् । याँ तपाईंले आफ्नो जिमेल एकाउन्ट लग इन गर्नुपर्ने हुन्छ । ध्यान राख्नुस् कि, तपाईंले त्यही इमेल आइडी यहाँ राख्नुपर्छ जुन आफ्नो फोनको गुगल प्लेस्टोर लगइन गर्नलाई तपाईंले राख्नुभएको थियो । त्यसपछाडि एउटा नक्शा देखिन्छ । यसले तपाईंको एन्ड्रोइड फोनलाई ट्रयाक गर्छ ।
र, यसको लोकेसन देखाइदिन्छ । जुन ठाउँमा तपाईंको फोन हुन्छ, त्यसको पूरा ठेगाना देखाइदिन्छ ।
यसको अलावा यहाँ तीन अप्सन, ‘रिङ, लक र इरेज’ दिइएको हुन्छ । रिङ अप्सनमा क्लिक गर्दा तपाईंको फोनको घन्टी बज्छ । लक अप्सनमा जाँदा स्त्रिनमा पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ । इरेज अप्सनको प्रयोग गर्दा एन्ड्रोइड फोनमा भएका तपाईंका सबै निजी डाटाहरू मेटिन्छन् ।
प्रकाशित मिति १९ पुष २०७६, शनिबार १४:३६